China ultrasonic ilaina menaka emulsifier menaka fanamboarana sy orinasa | Hangzhou Precision
rongony nalaina (CBD, THC) dia molekiola hydrophobic (fa tsy mety solon'ny rano). Mba hanoherana ny tsy fahalavorarian'ny cannabinoids anaty rano hampidirana sakafo, zava-pisotro sy menaka dia ilaina ny fomba emulsification.
Emulsifier menaka CBD ilaina amin'ny ultrasonic dia mampiasa hery mahery vaika amin'ny rongony ultrasonic mba hampihenana ny haben'ny vongan-dranon'ny cannabinoids hamokarana nanoparticle, izay ho kely kokoa noho ny 100nm. Ultrasonics dia teknolojia ampiasaina be amin'ny indostrian'ny pharmaceutika amin'ny fanaovana nanoemulsions mety ho voavaha rano.
Emuliona rongony / rano - Ny nanoemulsions dia emulsion manana habe kely mitete izay manana toetra manintona maro ho an'ny famolavolana cannbinioid, anisan'izany ny mazava kokoa, ny fitoniana ary ny viscosity ambany. Ary koa, ny nanoemulsions novokarin'ny fanodinana ultrasonic dia mitaky fifantohana surfactant ambany mamela ny tsiro sy ny mazava tsara amin'ny zava-pisotro.
Tandroka firaka titanium, tanky fitaratra.
Afaka mifehy ranon-javatra 10L, avy
Afaka mifehy 30L
JH-BL5L / 10L / 20L, mifanila amin'ny chiller.
1. Noho ny vongan-drano CBD dia niparitaka tamin'ny nanoparticle, nitombo be ny fitoniana ny emulsion. Ny emulsion vokarin'ny ultrasonika matetika dia miorina tsara tsy ampiana emulsifier na surfactant.
2. Ho an'ny menaka CBD, ny emulification nano dia manatsara ny fitrohana cannabinoids (bioavailability) ary miteraka vokatra lalina kokoa. Noho izany ny doka vita amin'ny rongony ambany dia mety hahatratra ny vokany mitovy.
3.Ny fiainan'ireo fitaovantsika dia mihoatra ny 20.000 ora ary afaka miasa tsy tapaka mandritra ny 24 ora isan'andro.
4. fanaraha-maso Integrated, fanombohana fanalahidy iray, fandidiana mora. Afaka mifandray amin'ny PLC.
Previous: Masinina homoegnizer manaparitaka ultrasound 20Khz
Manaraka: milina fambolena ultrasonic milina fitrandrahana pectin
fitaovana emulsification menaka rongony rongony f ...